Literature in Zimbabwe – ZIMBABWE MONITOR
January 11, 2019 September 16, 2019 Karen
Literature in Zimbabwe
Although eclipsed by Zimbabwean sculpture, Zimbabwe has a rich literary tradition. In literature, Zimbabwe can boast some of the continent’s most eminent English-language writers such as Dambudzo Marechera, Chenjerai Hove, Yvonne Vera, Charles Mungoshi, Tsitsi Dangarembga, and Shimmer Chinodya. Less known writers’ activities are encouraged and cultivated by the Zimbabwe Writers’ Union , and the Budding Writers organisations. Zimbabwe can also take pride in a vibrant literature in local languages, dating back to the 1950s.
After independence, Zimbabwe made substantial progress in developing educational opportunities for black people, and until recently could boast a higher literacy rate than, for example, England. It is no coincidence that, after its inception in 1983, the Zimbabwe International Book Fair grew to be Africa ‘s biggest book fair, a position only threatened by the crisis, which keeps foreign visitors and business away.
Previous History Monday: Mosi-oa-Tunya/ Victoria Falls
Next History Monday: Mutapa Dynasty